Yakanakisa PCB Gungano/ Yakadhindwa Circuit Board Vagadziri | Best Technology
Iyo yakanakisa PCB inogadzira yeFPC, Rigid-flex, MCPCB, Ceramic PCB, uye PCB gungano.
Imwe / kaviri Layer Pcb
Kuburikidza negomba Pcb Assembly
Mechanical Uye Membrane Switch Assembly
Yakadhindwa redunhu bhodhi vagadziri nokuda mcpcb, zvedongo pcb, rinorema mhangura pcb, fr4 pcb, yokuwedzera nhete pcb, flexible pcb uye rigid flex pcb.
Yakanakisa Tekinoroji Yakadhindwa Circuit Board Zvigadzirwa & PCB Gungano
Best Technologyakadhindwa redunhu bhodhi vagadziri ndivo chete-stop solution vanopa iyoyakanakisa PCB musangano sevhisi mune inochinjika yakadhindwa redunhu bhodhi, simbi yepakati PCB, ceramic PCB, fr4 PCB, etc. Welcome kubvunza!
Unoziva here kuti PCB etching chii?
Etching inzira yekubvisa zvinhu uchishandisa kemikari kana kuita kwemuviri. Matekiniki ekucheka anogona kupatsanurwa kuita wet etching uye dry etching.
SMT ndiyo tekinoroji yekumusoro (surface mounting technology) (kupfupikiswa kweSurface Mounted Technology), inova tekinoroji inonyanyozivikanwa uye maitiro muindasitiri yegungano remagetsi.Tekinoroji yedunhu repamusoro regungano (Surface Mount Technology, SMT), inodaidzwa kuti kukwidziridzwa kwepamusoro. kana tekinoroji yekumisikidza tekinoroji.Iyo tekinoroji yekubatanidza tekinoroji iyo instno pini kana ipfupi lead yepasi musangano chikamu (SMC / SMD, Chinese chip chikamu) pamusoro peyakadhindwa redunhu bhodhi (Printed Circuit Board, PCB) kana pamusoro peimwe substrate. , uye inotungidzwa neyakadzokororwa welding kana immersion welding.
8-Layer 4OZ inorema mhangura ndiro
Chii chinonzi PCB gobvu ndiro yemhangura?Ndiro yakakora yemhangura inoratidzwa mukumirira, paine imwe nzira yehunyanzvi uye kuoma kwekushanda, uye mutengo unodhurawo. Mutsara wefoiri yemhangura inosungirirwa muchikamu chekunze cheFR-4. Kana kukora kwemhangura kwapera 2oz, inotsanangurwa sendiro yakakora yemhangura yePCB.PCB gobvu ndiro yemhangura ine yakanaka kwazvo yekuwedzera kuita, isina kuganhurirwa nekushisa kwekugadzirisa, nzvimbo yakakwirira yekubheka inogona kushandiswa kana okisijeni ichivhuvhuta, tembiricha yakaderera isingachinji. brittle uye dzimwe nzira dzinopisa dzekubikira, uye kudzivirira moto, kupararira mune zvisingabatike zvinhu, gobvu mhangura PCB ukobvu hwayo hwakasiyana, iwo chaiwo maficha ekushandisa akasiyana zvakanyanya.
Iwo mana akaturikidzana e2 OZ inorema mhangura PCB inobva kune yakanakisa tekinoroji muChina
MuPCB proofing, chidimbu chemhangura chinosungirirwa pafr-4 pamusoro. Kana ukobvu hwemhangura ≥ 2OZ ichiitwa, inotsanangurwa sendiro yakakora yemhangura. Ukobvu hwayo hwakasiyana, iyo chaiyo inoshandiswa nzvimbo yakasiyanawo zvikuru.
Iyo 10-layer PCB board inobva kune yakanakisa tekinoroji muChina
Multi-layer circuit board inowanzotsanangurwa se 10-layer —— 20-layer kana pamusoro, iyo yakaoma kupfuura yechinyakare multi-layer circuit board processing, hunhu hwayo uye kuvimbika zvinodiwa zvakakwirira, zvinonyanya kushandiswa mumidziyo yekutaurirana, yakakwirira. -kupera maseva, zvemagetsi zvekurapa, ndege, kutonga kwemaindasitiri, mauto uye mamwe minda.
Single Sided Thick Firimu Ceramic PCB
Gobvu firimu redunhu bhodhi, rinozivikanwawo se hybrid redunhu bhodhi, rinoumbwa nekudhindwa kwescreen pane substrate yezvinhu zvakasiyana. Iyo substrate inonyanya 96% alumina ceramic zvinhu.
Nyanzvi mugadziri muChina kugadzira gobvu firimu ceramic.Gobvu firimu PCB, Ceramic PCB
Kaviri Sided Thick Firimu Ceramic PCB
Nyanzvi mugadziri muChina kugadzira gobvu firimu ceramic.
Akanakisisa Pcb Mugadziri Ane Assembly Services
Theyakanakisa PCB mugadziri inotarisa pane imwe-stop solution mutsika yakadhindwa redunhu bhodhi uyePCB musangano.
Kubva pakutanga, sezvo rakadhindwa redunhu bhodhi mugadziri pamwe zvakanakisisaPCB musangano sevhisi muAsia, Yakanyanya Tekinoroji yakatsaurirwa kuve mudiwa wako wepamberi wepamberi, yakakwirira-chaiyo yakadhindwa edunhu mabhodhi, senge inorema mhangura mapuranga, Ultra-yakaonda PCB, yakasanganiswa layers, yakakwira TG, HDI, yakakwirira frequency (Rogers, Taconic) , impedance controlled board, Metal Core PCB (MCPCB) yakadai seAluminium PCB, Copper PCB, uye Ceramic PCB (conductor Copper, AgPd, Au, etc) zvichingodaro.
Yeduakadhindwa redunhu bhodhi vagadziri kupa kwete PCB chete& MCPCB kugadzira, asiwo kusanganisira PCB kudzokorora, Injiniya& process design, components management& sourcing solution, PCB in-house assembly& kusanganiswa kwehurongwa hwakazara, uye tekinoroji yakamisikidzwa (SMT), yakazara zvigadzirwa musangano& kuedza.
Best Technologyvakadhindwa vanogadzira bhodhi redunhu vane makore anopfuura 15 echiitiko, nguva dzose pindura mukati meawa gumi nemaviri, neakanakisa PCB sevhisi yegungano nemutengo wakanaka.
PCB Hunhu ndiyo musimboti wezvigadzirwa. Zvese mainjiniya& Vakakosha vedhipatimendi vakomana vane makore anopfuura mashanu echiitiko muPCB indasitiri, isu tinotevera neiyo default PCB standard, pamwe nechikumbiro chakakosha chevatengi.
Vazhinji vedu mainjiniya nevashandisi vane makore anopfuura gumi echiitiko muPCB indasitiri, saka tinogona kugadzira yakakosha senge 20 OZ inorema copper board, 4 layer MCPCB, nezvimwe.
Takatenga michina yemhando yepamusoro, yemhando yepamusoro& zvishandiso zvePCB kugadzira, uye kutarisa, kuvandudza kunaka kwemabhodhi edu.
Isu tiri kuenderera mberi nekuvandudza MCPCB yedu, FR4 PCB& FPC& Ceramic PCB yekugadzira mazinga kuti uwane zvinogutsa mhedzisiro kubva kune vatengi uye isu pachedu.
About Best Technology akadhindwa redunhu bhodhi vagadziri
Yakanakisa Tekinoroji tsika pcb mugadziri, yakavambwa muna Chikumi 28, 2006, ikambani yakanyoreswa yeHong Kong iyo yakatarisa kune imwe-stop solution mupi weFPC, Rigid-flex PCB, MCPCB, FR4 PCB, Ceramic PCB, Special PCB yakadai seHeavy Copper ( kusvika ku20 OZ), yakawedzera nhete PCB (0.10, 0.15mm), uye sevhisi yegungano rePCB.
Kubva payakatanga, seyakadhindwa redunhu bhodhi (PCB) mutengesi muAsia, Best Technology yakatsaurirwa kuve wako wepamusoro PCB mugadziri wepamhepo mabhodhi edunhu, akadai semapuranga anorema emhangura, Ultra-yakaonda PCB, yakasanganiswa. akaturikidzana, yakakwira TG, HDI, yakakwira frequency (Rogers, Taconic), impedance controlled board, Metal Core PCB (MCPCB) yakadai seAluminium PCB, Copper PCB, uye Ceramic PCB (conductor Copper, AgPd, Au, etc) zvichingodaro.
Isu tinopa kwete PCB chete& MCPCB kugadzira asiwo kusanganisira PCB kudzokorora, Injiniya& process design, components management& sourcing solution, PCB in-house assembly& kusanganiswa kwehurongwa hwakazara, tekinoroji yakamisikidzwa (SMT), uye yakazara zvigadzirwa kusangana& kuedza.
Yakavimbika mhando kusangana nevatengi vedu
Musi waChikunguru 11, takava nemutengi anoshamisa kubva kuGermany akatishanyira
Musi waChikunguru 11, takava nemutengi anoshamisa kubva kuGermany akatishanyira mangwanani ano, kutaura zvazviri Peter, maneja wedu mukuru naTiffany, musikana wedu achangoshanyira kambani yake mwedzi wapfuura muFrankfurt. Panguva ino Mutengi akashanyira hofisi yedu, FPC, SMT fekitori uye akadya kudya kwemasikati kunonaka nesu. Uyezve, akatipa mamwe mapurojekiti zvakare anosanganisira Ceramic PCB.Tinotenda nerutsigiro rwake rwakakura uye isu tichazvipira kupa vatengi vedu izvo zvinowedzera uye zvinogutsa zvigadzirwa nemasevhisi.
Taive nemutengi mumwe chete kubva kuUS akatishanyira musi waChikunguru 25, 2019
Takanga tine mutengi mumwe chete kubva kuUS akatishanyira musi waChikunguru 25, 2019. Akashanyira fekitari yedu yeSMT neFPC uye akafara kuona vashandi vedu vane ruzivo mumusangano wakajeka, zvigadzirwa zvekutumira zvinokurumidza zvine vimbiso yemhando.
Tsika kubva kuAustralia yakataurirana chirongwa chake neBest Technology
Mumwe wevatengi vedu vanoshamisa, akashanyira kambani yedu muna Kubvumbi 3, 2019.Mutengi akataura kuti Best Tekinoroji yakakosheswa semupi anokosheswa wezvigadzirwa zvemhando yepamusoro izvo zvaizadzisa zvavanoda chaizvo.Akaenda pamusoro pezvinodiwa zvePCB izvo zvaizodiwa kune zvavanoda zvekugadzira uye akatipa fungidziro yechigadzirwa inodiwa kumapurojekiti aya.
BATIDZANA NEBAKA PASI PB MANUFACTURER